Soollaradii Nalalka Siinayay Waddooyinka Muqdisho Oo Suuqyada lagula Kala iibsanayo [Warbixin].
Monday November 05, 2018 - 10:14:27 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Burbur iyo dayacaad ayaa kajira qaar kamid ah waddooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho oo sanado ka hor dowladda Federaalka ay lacago malaayin dollar ah shacabka uga aruurisay in ay dib usoo celinayso bilicdii caasimadda.
waddooyinka Muqdisho ayaa mugdi noqday
Inta badan waddooyinka waaweyn ee gobolka Banaadir waxaa laga dareemaa burbur marka ay roobabku bilaawdaan intaas waxaa sii dheer iyo labililiqeystay nalalkii cadceedda ku shaqeynayay ee lagu xiray waddooyinka.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in shaqaalaha dowladda hoose ay furfurteen Sollaradii layararka siinayay waddooyinka kadib markii maamulka gobolka Banaadir uu bixin waaye lacagihii ay mushaaraadka uqaadan jireen.
Suuqyada waaweyn ee magaalada Muqdisho waxaa laga heli karaa Sollarro lacag rakhiis ah lagu iibinayo "Waddooyinka Wadnaha,Sodonka iyo Warshadaha waa mugdi oo wax nalal ah kama shidna xilliyada habeenkii ah, shaqaalihii qaabilsanaa nalalka ayaa furfurtay Sollaradii waaweynaa oo suuqyada ayaaba lagu iibinayaa" sidaasi waxaa yiri qof ku sugan degmada Hodon.
Soollarka nuuca Jarmalka lagusoo farsameeyo oo 100W ah waxaa suuqyada lagu iibiyaa lacag dhan $45 balse midka lagasoo furay waddooyinka ayaa suuqyada lagu iibiyaa lacag dhan $20 dollar illaa $25 dollar.
Sidoo kale qalab ay dowlado shisheeye horay ugu deeqeen dowladda Federaalka ayaa iyagoo xaraash jaban ah lagu kala iibsanayaa suuqyada waaweyn ee magaalada Muqdisho, shaqaalaha dowladda ayaan muddo sedax bilood xiriir ah qaadan wax mushaaraad ah taas oo keentay in ay suuqyada geystaan hantidii maamulku lahaa.
Arrinta fadeexadda ku ah maamulka Yariisoow ayaa ah in marka dhibcaha roobka oo aan badenyn ay Muqdisho ka da'aan la arko waddooyinka laamiga ah oo go'a waxaana ka dhashay khasaara soo gaaray dadweynaha.
Tan iyo markii xukuumadda Farmaajo ay hoggaanka uqabatay Villa Somalia waxaa isisoo tarayay waxqabad la'aanta iyo lacagaha baadda ah oo ay ka qaadaan ganacstada iyo guryaha magaalada Muqdisho.
Wadada Makka Al Mukarrama ayaa ah meesha kaliya ee nalalku ka shidanyihiin xilliyada habeenkii ah waxaana sidaas loo yeelayaa waa wadada ugu badan oo ay isticmaalaan madaxda dowladda.
Shirkado laga leeyahay dalka Turkiga ayaa qandaraas ku qaatay dhismaha waddooyinka caasimadda mana jirin cid ku koontarooshay shaqada ay qabanayaan taas oo keentay in waddooyinkii ladayactiray ay halkoodi hore ku laabtaan.